MICS. FANISANA NY VEHIVAVY SY NY ANKIZY : « Hanampy amin’ny fampandrosoana» | Madatopinfo
MICS. FANISANA NY VEHIVAVY SY NY ANKIZY : « Hanampy amin’ny fampandrosoana»
«Isa no fototr’izao rehetra izao». Hoy ilay mpandalina Grika antika, Pythagore. Araka ny fanambaran’ny Minisitry ny Toekarena tamin’ny mpanao gazety, nandritra ny fanombohana ny ho fanisana ny mponina amin’ny lafiny sosialy, teo Anosy, ny 8 Aogositra dia : « Fanaovana fanadihadiana ny zava-misy eo anivon’ny fianakaviana, indrindra ny vehivavy sy ny ankizy no tanterahina, mba hahazoana tarehi-marina entina mampandroso ny firenena. Tsy afa-miala amin’ny vehivavy ao an-trano no kitro ifaharan’ny fampandrosoana. Miainga amin’ny fandalinana ny fahita eo amin’ny ankohonana no fototry fakana fanapahan-kevitra. Maharitra telo volana eo ny fanaovana ankety, manomboka ny volana Aogositra ary mifarana ny Oktobra, amin’ny alalan’ny fakana santionany manokana fa tsy hanerana ny Nosy no ho vita tahaka ny fanisam-bahoaka farany teo. Marihina moa fa mialohan’ny faran’ny taona 2019 vao hivoaka ny isa marin’ny Malagasy izay natao volana vitsivitsy lasa izay”. Hoy ny Minisitry ny Toekarena, Marcel Napetoky, mpiahy miaraka amin’ny UNICEF izao fanisana sy angom-baovao mahakasika ny zaza amam-behivavy izao. Marihina fa sambany eto Madagsikara ity fanadihadiana amin’ny alalan’ny santionan’isa ity izay tanterahina eo anivon’ny tokatrano na MICS, Multiple Indicator Cluster Survey. Mifanaraka amin’ny tanjon’ny fampandrosoana maharitra maneran-tany sy ny drafi-pirenena ho amin’ny fampandrosoana izao hetsika izao. Mpiantsehatra 180 izay nofanina nandritra ny iray volana no hisahana ny tetikasa, mandeha tsieninenina izy ireo, noho izany andiany 30.
Midika izany fa tsy tena hitombona araka ny tena izy fa hanakaiky ny vinavina manoloana ny ho fahaterahana sy fahafatesan’ny mpiray tanindrazana izay tahaka ny manan’aina rehetra. Araka ny fintim-baovao avy amin’ny Lehiben’ny rafitra amin’ ny Statistika manerana ny Nosy na ny INSTAT : “ tokatrano 21.000 no hanaovana ny fanadihadiana amin’ny Faritra 22 eto Madagasikara . Amin’ny alalan’ny renim-pianakaviana no ezahana hamoahana ny vaovao. Misy tetipanorona iarahana amin’ny manam-pahefana eny an-toerana sy ny mpitandro filaminana. “Hoy i Ida Clément Rajaonera, Lehiben’ny rafitra amin’ny salan’isa manerana an’i Madagasikara. Miompana amin’ny fanabeazana, ny fanjifana rano fisotro madio, ny fiterahana, ny fahasalaman’ny reny sy ny zaza hatrany ambohoka, ny herisetra, ny asan’ny ankizy, ny fanjarian-tsakafo … no hohadihadiana ao anatin’izany.
Ady amin’ny fahantrana
Ny sampandraharahan’ny Firenena Mikambana misahana ny zaza amam-behivay na ny UNICEF, raha mahita ny toe-piainan’ireo zaza amam-behivavy dia tsy misalasala manao tantsoroka amin’izao fanisana ara-tsosialy ny mponina izao. “Zava-dehibe loatra ny fahafantarana araka ny tena izy ny fiainan’ny mponina mba ahafahana mamaritra ny politika fampandrosoana ny Malagasy, indrindra ny renim-pianakaviana sy ny zazavavy ary ny ankizy. Entina hampihena ny fahantrana eto Madagasikara no tanjona faratampon’izao fanisana izao. Io fanisana io no hahafahana mametraka ny sehatra ilana ezaka sy fanamby. Ny fanisana farany, tahaka ny 2010 izao dia nahafahana namaritra tetikasa ary nampivoatra fianakaviana maro”. Hoy i Gaby Guerrer, lehiben’ny sehatra politika sy socialin’ny UNICEF eto Madagasikara. Marihina fa ny vokatra fanadihadiana aratsiantifika toy izao dia misy fiatraikany amin’ny tetikasa sy ny fanapahakevitry ny mpitondra ary mipaka any amin’ny sarababem-bahoaka. Matetika anefa miankina amin’ny toe-draraham-pirenena ihany koa ny sosialy ny ny toekaren’ny firenena. Azo antoka fa manana enti-manana ara-tarehimarika sy salan’isa mitombona izay fitondrana ho avy eo ka sahy handray fanapahan-kevitra avy hatrany amin’izay ilain’ny vahoaka. Tsahivina fa ny Tahirimbola Manerantany sy ny USAID no mizaka ny ara-bola.